Apple , iPhone5လေးဝယ်လုိုလျှင် ~ Shannilay
Apple , iPhone5လေးဝယ်လုိုလျှင်
TAC Apple Store မှ Apple Fan များအတွက် iPhone5ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ရောင်းချပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Apple ဧ။်နောက်ဆုံးပေါ် handset iPhone5မှာ ထူးခြားတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် နည်းပညာတွေ များစွာ ပါဝင်လာပါတယ်။ ကြည်လင် ပြတ်သားသော 4” (1136 x 640 resolution) 16:9 widescreen Retina display၊ ပါးလွှာပေါ့ပါးသော အလူမီနီယံ ကိုယ်ထည်နဲ့သေသပ် ခန့် ငြား လှပ ပါတယ်။ iPhone 4S ထက် 18% ပိုမိုပါးလွှာပြီး 20% ပိုမိုပေါ့ပါးပါတယ်။ iPhone5မှာ အသုံးပြုထားသော A6 processor က iPhone 4S, iPad 2, New iPad တို့ တွင် အသုံးပြုထားသော A5 processor များထက် နှစ်ဆ ပိုမို မြန်ဆန်သောကြောင့် apps, surfing, games စသည် လုပ်ဆောင်ချက်များမှာလည်း နှစ်ဆပိုမိုမြန်ဆန် လာပါတယ်။ 3G သာမက 4G LTE နည်းပညာ ကိုပါ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အတွက် cellular download အမြန်နှုန်း 100Mbps ထိရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Wifi နည်းပညာ Dual-band 802.11n ကသာမန် handset များနှင့်မတူ အမြန်နှုန်း 150 Mbps ထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS6operating system မှာ 28 megapixels မြင်ကွင်းကျယ် 240 degree panoroma camera mode, photorealistic 3D မြေပုံ များရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး Siri ကလည်း မိမိသိလိုသမျှကို ဖြေကြားတာထက် ပိုမိုသော လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တွေ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Nano SIM Services ကိုလည်း TAC Apple Store မှ ၀ယ်ယူသော Customers များအတွက် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု့ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ MPT မှ ဌားရမ်းပေးသော ငွေကျပ် ၁၅သိန်းတန်၊ ၅သိန်းတန် နှင့် ၂သိန်းတန် GSM SIM Card များကို Nano SIM Card အဖြစ် အခမဲ့ပြောင်းလဲပေးသွားမည်ဖြစ်သည့်အပြင် Nano SIM မှ Micro SIM, Mini SIM သို့ ပြောင်းလဲနိူင်သည့် Adaptor များကိုလည်း ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
iPhone5model များကို 16GB, 32GB, 64GB (အဖြူရောင် / အနက်ရောင်) ရရှိနိုင်ပြီး iOS6operating system နဲ့ အတူ အောက်ပါ အတိုင်းဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ihone5အား TACApple Storeတွင် အောင်မြင်စွာ စတင်ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်ပါ၍ အမှတ်(၄၅)၊၇မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်းရှိ Show room သို့ လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Phone: 01-662749, 01-660923, Email:sales@tacmm.com သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
(Photo : Apple) The iPhone5is expected to break sales records this fall, without any NFC.
For the readers out there who have yet to take the plunge with the iPhone 5, Latinos Post has collected the international prices of the device across several regions. The device is available is 16, 32, and 64 GB in all regions.
The iPhone5is made out of glass and aluminum, taking the helm as the thinnest and lightest iPhone ever, at 7.6mm. The new device is 18 percent thinner than the 4S, weighs 112 grams, hasa4-inch screen, displays at 1136 x 640 pixels witha16 x9aspect ratio, anda326 PPI Retina display. Apple also removedalayer from the display to make the touch sensors "sharper."
The iPhone5features LTE, HSPA+, and DC-HSDPA. LTE is available for Verizon, Sprint, and AT&T users in the US. The new Wi-Fi will be 2.4GHz, and 5Ghz on 802.11n.
The device sports the new A6 chip, andanew "Lightning adapter" to replace the traditional 30-pin connector.
France: The 16, 32, and 64GB sell for €679, €789 and €899 (US Dollars - $879, $1,021, $1,164)
Germany: The 16, 32, and 64GB sell for €679, €789 and €899 (US Dollars - $879, $1,021, $1,164)
Australia: 16, 32, and 64GB sell for A$799, A$899 and A$999 (US Dollars - $833, $937, $1,042)
Hong Kong: 16, 32, and 64GB sell for HK$5,588, HK$6,388 and HK$7,188 (US Dollars - $721, $824, $927)
© 2012 Latinos Post. All rights reserved. Do not reproduce without permission.
Read more at http://www.latinospost.com/articles/4529/20120924/iphone-5-price-compare-apples-smartphone-cost.htm#JufCVXBeBCsq8u7D.99
vote0People
low price 41,900 ฿
from2shop
low price 38,000 ฿
low price 33,000 ฿